Boobka doorashadu waa shirqool hor leh | KEYDMEDIA ENGLISH
Boobka doorashadu waa shirqool hor leh
Guuxa Siyaasiyiinta ayay KON ka soo xiganeysaa in boobka doorasho ee Fahad iyo Farmaajo ka billaabayaan Galmudug, ee Qoorqoor hirgalinayo ay dhali karto xasarado siyaasadeed oo ka saameyn badan kuwii Caasimadda ee dhamaadkii April.
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya – Madaxweynaha Galmudug, Axmed Qoorqoor, oo ku daaban Farmaajo iyo Fahad Yaasiin, ayaa go’aansaday inuu shirqool hor leh u maleego hannaanka doorashooyinka, si dib-u-dhaca iyo daahu u sii bato, Farmaajana Madaxtooyada u sii joogo waqti dheeraad ah.
Warar isa soo taraya oo ka imaanaya Dhuusamareeb, ayaa sheegaya in Qoorqoor qorsheeyay boobkii ugu ba’anaa iyo bililiqadii ugu darneyd ee doorasho ka dhacda Soomaaliya, wuxuuna todobaadkaan soo saari doonaa shan kursi oo aan midkood si daah-furan loogu tartamin.
Qoorqoor, wuxuu durba xerooyin ku shubayaa shaqsiyaad lagu sheegay ergooyin aan aqoon kuraasta ay u codeynayaan iyo Xildhibaanka ay dooranayaan, kuwaas oo ay ku jiraan, wakiilo ka socda NISA, oo la doonayo in ay doortaan Yaasiin Farey iyo Cabdishakuur Cali Mire.
RW Rooble, ayaa u muuqda inuu kaliya diiradda saarayo doorashada kuraasta, si uu isaga yareeyo cadaadiska caalamiga ah ee ka imaanaya Beesha Caalamka, hayeeshee, dhaqanka boobka ku dhisan ee doorashooyinku ku billawdeen, ayaa sabab u noqon kara, gacan ka hadal sababa dib u dhac hor leh.
Tallaabooyinka Qoorqoor, ee ku wajahan iba-furka doorashada Golaha Shacabka ee hufnaanta ka maran, wuxuu cawaaqib foolxun ku yeelan karaa, jiritaanka Galmudug, dowlad-goboleed ahaan, xasilloonida amniga & guud ahaan siyaasadda Soomaaliya, sida ay ku doodayaan dadka u dhuunduleela Siyaasadda.
Cornel Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare, oo soo qabtay xilka Agaasimaha Hay'adda Nabad-sugadda iyo Sirdoonka Qaranka, oo sanadkaan ka mid ah musharixiinta kursiga HOP-067, oo saacado ka hor ka soo laabtay caasimadda, kadib safar uu maalmihii la soo dhaafay ku joogay Dhuusamareeb, ayaa sheegay inuu halkaas ku soo arkay, hoggaan leh habdhaqan mooryaannimo.
Tuuryare, wuxuu sheegay in boobka doorasho ee Qoorqoor qosheeyay uu sababi karo in degaanka uu galo fowdo siyaasadeed iyo dagaal sokeeye, taas oo dib u dhac dhan dhan kasta ah dhali karta.
Wakiillada Beesha Caalamka, waxa ay si weyn hoggaanka Soomaalida ugu cadaadinayaan in doorashooyinka Golaha Shacabka la soo af-meero ka hor maalinta ugu danbeysa bisha December, hayeeshee, deg-deggaas oo xaalal ka dheer, wuxuu sababi karaa dib u dhac hor leh.
Mucaaradku waxa ay sheegeen in aysan aqbali doonin doorasho boob ah, iyo mid aan waqtigeeda la ciyimin, waxaana u qorsheysan in wixii ka danbeeya dhamaadka sanadkaan ay dhidibada u taagan Gole KMG ah oo dalka gaarsiiya doorasho la isla-oggol yahay.